Njengomshini oyinhloko wokuhlanza indlu - umshini wokuhlanza, udlala indima ebaluleke kakhulu, cishe yonke imindeni iyithuluzi elidingekayo. I-vacuum cleaner kulula ukuyisebenzisa, kepha abantu abaningi abakuthandi ukuhlanzwa nokugcinwa kwe-vacuum cleaner. Masifunde ukuthi singakuhlanza kanjani futhi sigcine i-vacuum cleaner ngeXiaobian. www.chinApp.Com China brand iwebhusayithi
1. Hlanza izesekeli zesundries nezokuqoqa uthuli ebhakedeni ngesikhathi, hlanza igridi yothuli nesikhwama ngemuva komsebenzi ngamunye, hlola ukuthi ngabe kukhona yini ukuvuza noma ukuvuza komoya, futhi uhlanze kahle igridi yothuli nesikhwama ngamanzi okokuhlanza nokufudumele, bese ushaya zome. Akuvunyelwe neze ukusebenzisa igridi yothuli eyomile nesikhwama.
2. Bheka ukuthi intambo kagesi ne-plug kulimele yini. Ngemuva kokuyisebenzisa, faka umoya kwekhoyili yamandla ibe yisixha bese uyilengisa ku-hook yesembozo sekhanda.
3. Ngemuva kokumunwa kwamanzi, hlola indawo okungena kuyo umoya ukuvimba noma imfucumfucu, kungenjalo uyihlanze bese ubheka igagasi elintantayo ukuthi alonakele yini.
4. Umshini kufanele uphathwe ngokunakekela futhi akufanele uthintwe ngamandla angaphandle.
5. Lapho umshini ungasebenzi, kufanele ubekwe endaweni enomoya futhi eyomile.
6. Lapho uhlanza umshini, sicela uwusule ngendwangu emanzi equkethe amanzi noma okokuhlanza okungathathi hlangothi. Akuvunyelwe nakancane ukucwilisa ikhanda lenjini enkulu emanzini ukuze kuhlanzwe. Ungasebenzisi okokuhlanza okucekela phansi njengophethiloli namanzi kabhanana, kungenjalo igobolondo lizoqhekeka
7. Ungawugcini umshini usebenza ngokuqhubekayo isikhathi eside. Sicela ulawule isikhathi sokusebenza esiqhubekayo kungakapheli amahora amabili, ngaphandle kwalokho kuzothinta impilo yesevisi yomshini.
8. Lapho i-vacuum cleaner isetshenziswa isikhathi eside, ukuncela kuzoncipha ngenxa yokuvinjelwa kwe-mesh yesikrini sokuhlunga. Ukuvikela ukwehla kokudonswa, isikrini sokuhlunga nesikhwama sendwangu kufanele kuhlanzwe njalo ngamanzi, bese komiswa endaweni epholile ukuze kusetshenziswe kabusha ukubuyisa ukuncela.
9. Uma injini enkulu ishisa, ikhipha iphunga elishisayo, noma inokudlidliza okungavamile nomsindo, kufanele ithunyelwe ukuyolungiswa ngesikhathi, hhayi ukuphoqelelwa ukuyisebenzisa.
10. Musa ukusonga i-hose njalo, ungadluli bese uyigoba.
11. Indawo yokuhlanza umshini akufanele ibekwe endaweni enomswakama noma ebhubhisayo ngangokunokwenzeka, futhi indawo enomoya omile kufanele ikhethwe ukugwema ukulimala komzimba
Ngemuva kokwethulwa kweXiaobian, kufanele sazi ukuthi singayihlanza kanjani i-vacuum cleaner.